Yintoni umahluko phakathi nesigcina isithuthuthu skate nesigcina-ntloko? - Jomo Technology Co., Ltd
A umbuzo apho abantu bebuza ukuba, 'Yintoni umahluko phakathi nesigcina isithuthuthu skate nesigcina? "Ngaphandle umahluko ezicaceleyo ngembonakalo, isithuthuthu skate iminqwazi ngokwenene ezahlukileyo ezisebenza ngeendlela ezininzi, kwaye ungathanda ukuba uqinisekise ukuba uthenge uhlobo lasekunene ntloko ngenxa ekhwele yakho Rubber yombane .
Uyakwazi ukubona umahluko coverage phakathi nesigcina bhayisekile rhoqo yaye omnye eyenzelwe ukukhusela ngasemva zentloko yenu. credit Image: The Sweethome
eneneni Omnye umahluko omkhulu phakathi ntloko isithuthuthu nezigcina skate ihlobene yoyilo ayikho. iminqwazi Skate, ezo ngokwemveli ngeenxa kunye agudileyo, yokuzunguleza emva kwentloko yakho. Oku kungenxa yokuba yenzelwe ukukhusela ekuweni ukuba skateboarders ngokuqhelekileyo athathe, apho ukuze umhlaba ngasemva lwentloko yawo. Ngokwahlukileyo koko, bikers kunqabile kuwa emva Happy zabo.
Ngokuba skateboarder yombane , Ndikucebisa yokufumana ntloko esigquma ngasemva zentloko yenu ngathi skate nesigcina zeMveli. Ngenxa ibhodi yakho uyakwazi ukukhawulezisa ngokukhawuleza, kubangela ukuba Bawuyeka nasemva ukuba sityhole kangakanani umcephe na ukuba isicelo.
Enye umahluko omkhulu phakathi nesigcina skate rhoqo kwaye isigcina ibhayisekile kukukwazi ezikhusela kwiintlobo ezahlukeneyo mpembelelo. Traditional, non-oqinisekisiweyo, iminqwazi skate zilungiselelwe kunye kwiqokobhe ugwebu lithambile okhusela iimpembelelo ezininzi ezincinane. Ngokwahlukileyo koko, nesigcina ibhayisekile yenziwe a amagwebu EPS nzima eyenzelwe ukuba ifuthe enye enkulu yaye bawaphule, emva koko kufuneka endaweni-ntloko.
Nangona iminqwazi skate yemveli, ezenzelwe skateboards eziqhelekileyo kunye longboards zombane , basoloko azingqinisiswanga, kufuneka ufumane i-ntloko skate ukuba usebenzisa EPS nzima efanayo amagwebu-ntloko ibhayisekile anayo, ukuba kusekho sikhusela umva zentloko yenu. Ungabona ngokulula zeziphi iminqwazi skate yenzelwe le ndlela ngokuqinisekisa ukuba CPSC eqinisekisiweyo.
Yintoni isigcina ekufuneka uthenga?
Zonke iminqwazi Ndakhe idweliswe kwisikhokelo sam ntloko zezi CPSC esingqinisisiweyo kwakunye eyenzelwe ukukhusela ngasemva zentloko yenu. Njengoba nje wena uqinisekise ukuba une-ntloko eqinisekisiweyo ukuba ukwakhusela ngasemva zentloko yenu, uya kuba ikhuseleke kakhulu kwi yakho skateboar sombane d.